Oxygen & Nitrogen Factory Project for Medical & Industrial Jiri ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | Ma ọ bụ
Oxygen & Nitrogen Factory Project maka Medical & Ọrụ eji
1, Ofụri Esịt Automatic Rotary Air Compressor.
2, Dị nnọọ obere ike oriri.
3, ： chekwaa mmiri dị ka ikuku Compressor na-eme ka ikuku dị mma.
4 ： 100% igwe anaghị agba nchara ewu kọlụm dị ka ASME ụkpụrụ.
5, Oxygen dị ọcha maka ọgwụ / ụlọ ọgwụ.
6, Skid n'ịnyịnya version (Enweghị ntọala achọrọ)
7, ịmalite ngwa ngwa ma mechie oge.
8, Na-ejuputa oxygen na cylinder site na mmiri ikuku oxygen
1, Low nsogbu Rotary ikuku compres.
2, Ọcha Skid zuru ezu na ihe niile.
3, Cryogenic Expander na Booster teknụzụ.
4, Rectification kọlụm elu arụmọrụ BOSCHI ITALY patented.
5, Oxygen cylinder filling system with oil free liquid oxygen mgbapụta.
6, Nitrogen cylinder na-ejuputa usoro na mmanụ na-enweghị mmanụ Nitrogen. (Nhọrọ)
Anyị ọkara size oxygen / nitrogen osisi e mere na-arụpụtara na ọhụrụ cryogenic ikuku nkewa technology, nke a tụkwasịrị obi dị ka ndị kasị oru oma technology maka elu ọnụego nke gas ọgbọ na elu-adị ọcha. Anyị nwere nka na uzu injinịa nke ụwa na-enyere anyị aka iwulite sistemụ gas gasị n'ụzọ kwekọrọ n'ichepụta mba na ịhazi ụkpụrụ ụwa niile. A na-echepụta ígwè ọrụ ihe ọkụkụ anyị mgbe anyị nụsịrị dịgasị iche iche gụnyere ọnụ ọgụgụ nke gas na mmiri mmiri ka a rụpụta, nkọwa dị ọcha, ọnọdụ gburugburu ebe obibi na nnyefe nrụgide chọrọ.
Nke gara aga: Medical Gas Oxygen Osisi maka Uslọ Ọgwụ Na-eji Igwe Oxygen Na-ejuputa Igwe
Osote: Ofu Ahịa Ọnụahịa China 50nm3 / Hour Psa Industrial / Medical Oxygen Generator High Ọcha Oxygen Plants
Psa Oxygen Generator Akụrụngwa
Igwe Igwe oxygen